Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 05/06/2020)
Kungani senza ngihambe ngesitimela? Izincwajana zemininingwane travel eziphumulele, kwenta na inikeza isici nomphakathi ukuthi ezinye izindlela zokuhamba nje angeke umadanise. Nokho, ukuhamba ukukhubazeka kungaba nzima kwabanye. Lokhu akusho ukuthi ngeke ukwazi ukujabulela in the fun, Nokho. Lesi sihloko linikeza izindawo ezithile eziyisisekelo ezidinga ukuba cabanga lapho uhlela yakho uhambo ngesitimela ngakho ukuhamba ukukhubazeka eYurophu akulethi ukucindezeleka.
Yikuphi zemininingwane ukuba Thatha ku Londoloza-A-zemininingwane uma Okuhambayo onokukhubazeka?
Wokujikeleza Special isevisi ukukhubazeka zingahluka kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye, kuncike eziningi umbandela; izimoto ku isitimela yakho ethile, izakhiwo ngaleso ahlukahlukene iziteshi kanye umzila wakho ngisho inqubomgomo yenethiwekhi yakho kwi ukufinyeleleka.
Hlola ithikithi lakho futhi uhambo ngokucophelela uma ulithola. Qiniseka ukuthi wena ukhululekile nezinqubomgomo zayo kanye nezinhlinzeko ukuze kungukuthi ikumangaze zingathintwa yakho ehlukahlukene (ikakhulukazi uma uhamba kwezilwandle).
Hlala izingxenye kufinyeleleke kakhulu edolobheni. Lena enye yezinhlobo ezingu izingxenye enzima uhlela uhambo lwakho isitimela ngenkathi ihamba onokukhubazeka. Kungenzeka ukuthi uke wathola ehhotela elikhulu kufinyeleleke, kodwa lokho ozoyithola lapho uhamba / unikezele ngezinsizakalo isicabha? Zikhona amagquma kanye izitebhisi kuzo zonke izinhlangothi? Ingabe kufanele phenduka cobblestones? Zikhona zokudlela kufinyeleleke eseduze? Kubalulekile ukucwaninga endaweni ihhotela. Ungasebenzisa Google Maps Street View ukuze uthole ulwazi oluyisisekelo, ke imeyli yehhotela imibuzo yakho.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho?, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-disability-europe%2F%0A- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)